Hiran State - News: HS:- Wasiirka Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga TFGda oo saacadaha soo socda laga yaabo inuu iscasilo.
HS:- Wasiirka Qorsheynta iyo xiriirka caalamiga TFGda oo saacadaha soo socda laga yaabo inuu iscasilo.
HS:-Breaking News:-Shiikh Shariif iyo wasiirka qorsheynta TFGda oo isku qilaafay siyaasadaha cusub ee dalka ka taagan iyadoo kala yaabo in wasiirku iska casilo xilka uu ku magacaban yahay maalmaha soo socda hadii aysan wax badan isbedelin.
Wasiirka qorsheynta TFGda Cabdullaahi Godax Bare ayaa lagu wadaa in xilkiisa iska casilo kedib markii ay soo baxeen dhaqano horey loogu sheegay inuu kala kulmi doono Shariifka oo uu iska indho tiray. wasiirka oo dib ugu laabtay magaaalada Mogdisho ayaa xafiiskiisa kula kulmay Shiikh Shariif isagoona Shariifka weydiiyey dhawr su'aalood oo uusan ka helin jawaab sax ah qaarkoodna ay ka muuqatay qeyrul masuulnimo ku cusub siyaasada Somaliya.
Shiikh Shariif oo aad uga carysnaa mowqifkii uu wasiirka qorsheynta ka qaatay arintii in leysku daro Hiiraan iyo Jowhar kedib markii uu wasiirku qaatay talo soo jeedintii ay aqoonyahano reer Hiiraan ah u soo jeediyeen in uu qaato oo uu howshaasi faraha kala baxo ayaa mar uu maanta la kulmay Shariifka weydiiyey bal waxa ka jira in shirkii wadatashiga laga soo weecinayo Garoowe oo ay Mahiga iyo Shariifka doonayaan in lagu qabto Mogdisho.
Shariifka ayaa ku jawabay arintaas wax badan baa ka jiro. wasiirka ayaa yiri madama aan ahey wasiirka qorsheynta howshaasina aan gudoomiye u ahaa sow ma wanaagsaneyn in isbedelka shirka ku yimid leysla socodsiiyo.
Shiikh Shariif oo walito u shaqeynayo qaabkii maxkamadaha ayaa ku jawaabay adiga howshaas wasiir ayaad ka tahay ee bal cagta dhulka u dhig ee meeshii loo badan yahay dhinacaada ka soo raac sidan ayaanu ku shaqeyn jirnay waligeen.
Wasiirka ayaa yiri sow dhibaatada dalka ka tagan uma muuqato inaad adiga qeyb ka tahay oo aadan dooneyn in dalka lagu soo dabaalo nabadgalyo leysku haleyn karo. Shariifka ayaa hadalkaas aad uga xanaaqay Cabdullaahi Godax oo ay kalsooni weyn ka muuqatay maadama uu ka tanaasulay arintii Hiiraan iyo Jowhar fikirkii Shariifkane ka dhigay wax aan jirin ayaa yiri. waxaan aad ugu faraxsanahay mowqifka ay reer Hiiraan ka qatatay arintii aan mooday iney xal aheyd laakisne hada sidaan kaa arko u muuqatay mid aad dan gooyni ah ka laheyd ee Jowhar iyo Hiiran in leysku daro.
Shariifka oo lafahiisa u cabsaday ayaa u yeeray ciidamda Yugandha kediba wasiirku waxuu shir la qaatay xildhibaanada ugu jira beesha Xawaadle baarlamaanka lamana yaqaano waxa ay arintooda ku danbeyn doonto inkasta oo uu wasiirku ka hor intii uusan go,aan rasmi ah qaadan laga yaabo inuu teleconfrence la yeesho jaaliyada qurbaha si uu meesha ay wax marayaan u sheego, halka dhinaca kale la leeyahay waxuuba go,ansaday inuu xilka iska casilo dhib la,aan hadiiba dhaqanka TFGdu sidan yahay.
Ugu danbeyn wasiirka qorsheynta hadii uu xilkaan iska casilo waxaa laga yaabaa inuu noqdo wasiirkii ugu danbeyey ee ka soo jeeda beesha Xawaadle oo xil ka qabta TFGda inta laga gaarayo doorashada soo socota mana muuqato qof isaga ka danbeeyo inta uu shariifka joogo inuu xil ka qaban doono TFGda oneway or another.
Shariifka oo horey u ogaa in wasiirkan qorsheynta kala kulmi doono hadalo kul kulul oo aan wax badan lagudayi karin ayaa hada dareemay culuska siyaasadeed ee wasiirka qorsheynta madama uu hadii uu iscaliso taageero badan ka helayo reer Hiiran iyo beesha uu ka soo jeedo tasi oo wal wal badan ku heysa Shariifka.
La soco wararkeena danbe iyo meesha ay arintaan ku danbeyso
Isha warka Hiiraan Styate
· admin on October 18 2011 19:18:32 · 0 Comments · 1887 Reads ·
14,613,677 unique visits